Ndeupi mutengesi zvishandiso iwe unogona kukurudzira kuAmerica keyword research?
Tisati takuudza mamwe maitiro akanaka uye anoshandiswa-anotsvakurudza ma Amazon mazita ekutsvakurudza, ngatitange nechikamu chezivo. Zvinosuruvarisa, Amazon haisati ichinyatsojekesa chero humwe mazano kana zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa neA9 ranking algorithm - saiyo makuru ekutsvaga injini, zvakadai seGoogle, Yahoo, Bing, etc. Asi pano ndizvo zvatinogona kuziva zvechokwadi - it solutions for your business in portland. Maererano neongororo dzinoitika munguva pfupi yapfuura:
Nemaitiro eAmerica keyword kutsvaga inoonekwa pakutamba zvakare (kunyanya panguva yacho). Zvinoreva kuti iwe unofanira kuita zvose zvaunogona kuti usapinda zvisizvo / zvizhinji zvisinganzwisisiki, kana kushandisa zviduku kana pamusoro pepamusoro kana zvichikwanisika, kunyanya kana zvasvika kumashoko ekudzokera shure.
Cherechedzai ichangobva kufungidzirwa miviri yezvigadziriswa makumi maviri nemakumi maviri ekuverengwa kwemashoko ako. Zvechokwadi, hapana mhedziso yakasimba yekusimbiswa nemahofisi ose eAmazon. Kunyange zvakadaro, iwe uri nani zviri nani kuramba uri parutivi rwakachengeteka uye tora mamiriro ezvinhu aya.
Kuchengeta izvozvo mupfungwa, inguva yekukuratidza mamwe maitiro angu akaongororwa eAmazon keyword research. Heano mhedziso shomanana yega imwe neimwe inoshandiswa munguva yekudzika zvakanyanya kutsvaga kutsvakurudza. Inzwa wakasununguka zvishoma kuedza izvi. Uye zvechokwadi, zvinongova kwauri iwe chete kuti usarudze kuti ndeupi wekutora zvaunogadzira zvinyorwa.
1. Keyword Eye - chinhu chakanaka chokukubatsira ne Amazon mazita ekutsvakurudza. Keyword Eye iri kutengesa pane dhiyabhorosi rakanyanyisa rakapetwa rinopfuura mamiriyoni rimwe akasiyana-siyana mazano mazano anotsigirwa nemavhareji ekutsvakurudza mavhesi kuti iwe usanyatsoziva kuti ndeupi wavo anogona kunge akakunda kutsvaga mazwi, uye chii chinotofanira kubvisa kubva pane yako huru rondedzero yezvinonyanya kukosha uye kwenguva refu-muswe pamwe chete.
2. Kparser - iyi inhare yepaIndaneti inogona kukurumidza kuwana nzvimbo yako yekutanga yekufanirwa-inowanikwa mazwi ekukosha uye zvikumbiro zvekutenga. Dhiyabhorosi inotorwa pamwe chete zvichibva pane zvitsva zvinotsvaga kutsvaga uye mararamiro emazuva ano ekutenga kwete kuAmazon neBay chete, asi kubva pakutsvaga kwepakutanga kuburikidza neGoogle neBing. Chinhu chakaipa chete pamusoro peKparser ndechekuti zvinosuruvarisa kuti iyi purogiramu yepurogiramu yepaIndaneti inopiwa pasi pekubhadhara kuripo kunowanikwa musimboti chete.
3. Keyword Kiwi - ndeimwe imwe nyanzvi yeAmerica keyword research tool, iyo inonyanya kubatsirwe nekuwana kunzwisisa kwakadzama kwevatengi vako. Shandisa database yakawandisa yakaumbwa nemashoko akazara pamusoro pezvinangwa zvevateereri, zvinonyanya kufarira, uye kutengeswa kwevanhu vakawanda - vakaungana zvakananga kubva kuAmerica pachavo, pamwe chete neGoogle shopping mamiriro, uye nhoroondo dze YouTube.
4. Asin Key - ndiro rekupedzisira rekutsvakurudza ruzivo rwandu ndinoda kukuratidzira nhasi. Pakati pemakona ayo akasimba, iyi yebasa rekushandisa iri paIndaneti ine mazamu akasiyana-siyana ega ega maitiro ezvigadzirwa zvemitengo anopiwa kune mutsara wemashandisi akasiyana. Ongorora mazita makuru ekutsvakurudza matanho neaya anotevera mu-akagadzirisa mazano: Amazon Product Listing SEO tool, yakasimudza Keyword Tracker, uye yakasimba yayo Keyword Mazano akafanana. Cherechedza, zvisinei, kuti Asin Key Amazon keyword yekutsvakurudza yeruzhinji ichakushumira iwe chete kana iwe uchinge uine kunzwisisa kwekutanga kwe SEO uye nemitemo inokosha ye ecommerce tsvaga tsanangudzo yegorgorithm.